Sideen lacag ugu diraa qof dibada jooga? : Dahabshiil Customer Portal
Dahabshiil Customer Portal
Solution home Somali FAQs Dirista Lacagta
Sideen lacag ugu diraa qof dibada jooga? Print
Modified on: Thu, 10 Jun, 2021 at 5:00 PM
Marka hore, dooro wadanka aad lacagta u direyso ama wadanka qaatahaagu u baahan yahay inuu lacagta ka helo, ka dibna geli lacagta aad rabto inaad dirto (ama lacagta aad jeceshahay qaatahaagu inuu helo).
Marka ku xiga, geli faahfaahinta qofka aad rabto inaad lacagta u dirto, ama ka xulo liiska xiriiradaada.
Dadka aad lacag hore ugu dirtay, waxaad yeeli kartaa inaad mar kale u dirto adigoo taabanaya lacagihii hore aad u dirtay. Marka aad taabato waxaa si toos ah u heleysaa dirida mar labaad iyadoo macluumaadki hore eey ku qoran yihiin, kali ah, waxaad badaleysaa qadarka lacagta aad direyso markaa hadii aad u baahato.